Taliyaha booliska Minneapolis oo Eedayn u soo jeediyay askartii dishay George Floyd. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Taliyaha booliska Minneapolis oo Eedayn u soo jeediyay askartii dishay George Floyd.
Taliyaha booliska Minneapolis oo Eedayn u soo jeediyay askartii dishay George Floyd.
Taliyaha booliska ee magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka ayaa waxa uu markhaati kacay in askarigii hore Derek Chauvin uu ku xadgudbay xeerka waaxdaas uga degsan isticmaalka awoodda markii uu soo xirayay George Floyd.
Taliye Medaria Arradondo ayaa sheegay in qaabka uu Mr Chauvid uu u cadaadinayay aanay meelna uga jirin tababarkii iyo “in dhab ahaantii aanay qeyb ka ahayn anshaxa iyo qiyamkeenna”.
Taliyaha ayaa shaqada ka joojiyay Mr Chauvin iyo saddexda askari ee kale ee arrinta ku lugta lahaa maalma uun kaddib markii uu geeriyooday Mr Flyod bishii May ee sanadkii hore.
Mr Chauvin ayaa waxaa loo maxkamadaynayaa dilka ninkaasi hasayeeshee waxa uu iska fogeeyay eedaha loo soo jeediyay.
Muuqaal laga duubay Mr Chauvin, oo ah nin caddaan ah, oo qoorta jilibka uga haya George Floyd oo ahaa Afrikaan-Ameerikaan, muddo ka badan 9 daqiiqadood sanadkii tegay ayaa waxa ay kicisay dibadbaxyo caalami ah oo loogaga soo horjeedo midab kala sooca.
Isniintii ayaa aheyd maalintii lixaad ee maxkamadaynta Mr Chauvin, taas oo la filayo inay socon doonto ugu yaraan muddo bil ah.
Muxuu sheegay taliyuhu?
Dacwad oogayaasha oo doonaya inay caddeeyaan in hab dhaqanka Mr Chauvin uu baalmarsan yahay tababarkii la siiyay, waxayna su’aalahooda diiradda ku saarayeen nidaamka waaxda iyo istaraatiijiyadda la baray si ay askartu ugu sahlanaato inay xaaladaha dajiyaan.
Mr Arradondo ayaa waxa uu maxkamadda u sheegay in Mr Floyd aanay ahayn in la sii caadiyo weliba qaabka ay boolisku sameeyeen kaddib markii uu joojiyay inuu is adkeeyo.
Waxa uu sheegay in nooca cadaadiska ee uu Mr Chauvin, oo 45-jir ah, uu adeegsaday aanay sax ahayn “mar hadduusan ninkaas is adkaynayn weliba markii uu arkay in Mr Floyd uusan wax hadal ah ka soo baxayn – oo xitaa uusan dhaqdhaqaaqayn”.
“Arrintaas meelna kagama jirto siyaasadda iyo xeerka, qeybna kama aha tababarkeenna, hubaashiina qeyb kama aha anshaxeenna iyo qiyamkeenna.”
Mr Arradondo ayaa sidoo kale hoosta ka xarriiqay in ay dhif iyo naadir tahay in askarta ay xiraan qof laga shakisan yahay oo lagu eedeeyay inuu dawooyin aan wanaagsanayn isticmaalaayo, sida xaalka Mr Floyd oo kale.
Taliyaha booliska ayaa sheegay in “in xaalka laga wada hadlo” ay marwalba ka wanaagsan tahay in awood la adeegsado, isagoo intaas ku daray in askartu ay tahay inay “gacan waydiistaan bulshada” markii ay suuragal tahay.
Qareenka difaacaya Chauvin, Eric Nelson, ayaa waxa uu Mr Arradondo su’aalo ka waydiiyay askarta marka ay hubka sidaas u lulayaan ee ay doonayaan inay xaalad kala furfuran, xilli Mr Chauvin uu dadkii waxa dhacayay eeganayay uu ku fiiqay qalabka basbaaska uu ku jiro.
“Mararka qaar askarigu waa qasab ku noqonaysa inuu qorigiisa la soo baxo, oo uu yiraahdo war heedhe haddaadan I dhagaysan awood ayaan adeegsan doonaa,” Mr Nelson ayaa yiri.
Taliyaha ayaa ogolaaday in arrintaas ay siyaasadda iyo xeerka ku jirto in mararka qaar qaabkaas loo dhaqmo si qofka laga shakisan yahay loo xakameeyo.
Markii Mr Nelson uu muuqaalka xariga Mr Floyd dhinacyo kala duwan ka tusiyay, ayuu Mr Arradondo sidoo kale hoosta ka xariiqay in waxyar ka hor inta aanay iman kooxda caafimaadka, ay u muuqanaysay in Mr Chauvin uu jilibkiisa ka weeciyay qoorta Mr Floyd oo uu ku qabtay dhinaca garabka.
Previous articleTurkiga oo xabsiga dhigay 10 sargaal oo howlgab ah marki ay cambaareeyeen mashruuca kanaalka madaxweyne Erdogan
Next articleAfhayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadlay shirka Afisyoone uga socda madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka,
Qoor Qoor oo isbadal ku sameeyey gudigii lagu murusanaa iyo...
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa xubno cusub kusoo badalay xubnihii guddiga doorashada iyo xalinta khilaafaadka doorashada ee dhawaan cabashada...
Afhayeenka Booliska Somali Oo Ka Hadlay Qaraxii Caawa Ka Dhacay Magaalada...
Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay oo u codeeyay in loo cusbooneysiiyo...
Wasaaradda Waxbarashada Puntland oo Shaacinaysa natiijada imtixaanka Shahaadiga ah ee dugsiyada...
Farmaajo oo Doonaayo in uu ku shubto Doorashada Somaliya iyo...
Safiirkii Talyaaniga u fadhiyay Jamhuuriyadda Dimuqraaddiga Confo oo goor dhawayd la...